Hatsarao ny famolavolana ny lahatsoratrao sy ny fipetrahana amin'ny WordPress miaraka amin'ny Shorcodes Ultimate | Famoronana an-tserasera
Ny iray amin'ireo fanirian'ny olon-drehetra rehefa nampiasa tranokala namboarina tamin'ny WordPress nandritra ny fotoana kelikely izy ireo dia ny fampitomboana ny fiasan'izy ireo amin'ny sehatra hita maso. Afaka mampiasa haingana ny singa sy ny hery efa voafaritra amboary matihanina ireo lahatsoratra sy pejy.
Ity no làlana nofidin'i WordPress tamin'ny andiany 5, nampahafantatra an'i Gutengerb sy ireo sakana ho mpamoaka lahatsoratra. Fa ny fahitana ny fomba hafa rehetra azo soloina eny an-tsena, izay be dia be, dia mila mijanona a plugin maimaim-poana Shortcodes Ultimate. Compendium ny singa ara-pahitana izay ho tena ilaina.
1 Inona ny kaody fohy?
2 Izay azoko atao
3 Solony amin'ny Shortcode Ultimate
Inona ny kaody fohy?
Ny kaody fohy dia kaody efa voafaritra izay azontsika ampiana amin'ny mpanonta anay eny an-dalana [shortcode] [/ shortcode] ary izany dia manampy antsika hanisy fiasa ho an'ny fampidirana. Tena ilain'izy ireo izy ireo satria manampy antsika hanafoana na hanafoana ireo lahasa miverimberina. Alao an-tsaina hoe te hampitandrina ny mpamaky izahay fa tsy andraikitsika ny zavatra ataon'izy ireo. Eny, fa tsy manome endrika azy isaky ny manoratra azy isika dia afaka mamorona kaody fohy [fampandrenesana] miaraka ambadika mena, sisintany ary kisary amin'ny ankavia ary isaky ny mametraka ny fampandrenesana isika dia mila fonosina fotsiny ilay lahatsoratra amin'ny kaody fohy ary hadikany izany.
[fampandrenesana] Fandraisana: Izay rehetra hitanao ato amin'ity bilaogy ity dia tokony hatao eo ambanin'ny andraikinao [/ fampandrenesana]
Ary ity no ohatra tsotra indrindra amin'ny rehetra. Manomboka eto isika dia afaka manomboka manangana endrika ho an'ny teny nalaina, horonan-tsary, fijoroana vavolombelona ary izay rehetra tonga ao an-tsaina.
Ary raha tsy haintsika ny mamolavola azy io, fa te hanararaotra ny tombony rehetra amin'ny hitsin-dàlana isika dia tsy maintsy misintona ilay plugin :)
Eto ianao dia afaka mahita tutorial momba ny plugin izay hahafahanao mahazo ny hevitry ny heriny sy ny fahaiza-manaony ary ny antony mahatonga azy io ho iray amin'ireo plugins be mpampiasa indrindra hanampiana fampiasa miaraka amin'ireo singa hita maso amin'ireo lahatsoratray sy lohahevitra WordPress.
Tena mahery izy io. Ampiasaina be izy io ho fanampin'ny fampidirana endrika amin'ny fidiran'ny bilaogy, amin'ny fametrahana ny fizarana transactional. Hanome anao fampiasa tsy noeritreretinao izy io.
Raha mieritreritra ianao manangana tranokalanao manokana hanana ny portfolio-nao ary ampahafantaro ny tenanao na hanombohana orinasa iray, tena tsotra izany, mila domain fotsiny ianao, fampiantranoana toa fampiantranoana tranonkala ao amin'ny Webempresa hametraka WordPress miaraka amina lohahevitra efa voafaritra ary ampio plugins araka izay tiany ;-) Shortcodes Ultimate dia ilaina raha te-hamolavola amin'ny fomba tsotra sy mahery ianao.
Solony amin'ny Shortcode Ultimate
Araka ny efa nomarihinay, ny safidy lehibe hafa androany dia ny tonian-dahatsoratry Gutenberg vaovao miaraka amin'ireo sakana sy plugins mifandraika izay manampy sakana manokana.
Blaogin'i Gutenberg adavanced
Safidy hafa toy ny mpanao visual (Divi, Visual Composer, sns.) Dia tsy raisina ho toy ny safidy hafa, satria amin'ny farany dia tsy mampiditra sakana, kaody fohy na mitovy aminy isika, fa mila manova ny firafitry ny fipetrahana rehetra, mamokatra ny encapsulation mampatahotra. Nefa ho hitantsika amin'ny lahatsoratra iray hafa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Hatsarao ny famolavolana ny lahatsoratrao sy ny fipetrahana amin'ny WordPress miaraka amin'ny Shorcodes Ultimate
Ahoana ny fomba hamoronana endrika mora azo amin'ny pejin-tranonkala